Warbixinta Skåne ee ku saabsan doorashada soomaaliga (MP Skånes valmanifest på somaliska) / Just nu / Skåne / Miljöpartiet
HemSkåneNyhet, 1 augusti 2018
Warbixinta Skåne ee ku saabsan doorashada soomaaliga (MP Skånes valmanifest på somaliska)
Waqtigan Xaadirka. Cimiladu kuma sugi karto. Xisbiga Bay'adda wuxuu rabaa inuu ka shaqeeyo gobolka Skåne oo ah mid ku dhisan Wadajir dad ,xoolo iyo Duunyaba. Deegaanka iyo cimilada waa arrimo mudan wakhtigan xaadirka is weydiimo. Waxay u baahan tahay siyaasiyiin geesinimo leh iyo muwaadiniinta ku dhaca in ay arkaan fursadaha ayna mudnaanta koowaad isbedelka ku dhaca bulsho cimilada tixgelisa. Xisbiga bay'ada wuxuu diyaar u yahay inuu ka qaato door dagaal ah oo ku aadan aayatiinka, iyo wadahadal kastoo siyaasadeed oo lala galo siyaasiyiinta si aad u adag.
Xisbiga bay'ada ee gobolka Skåne wuxuu doonayaa inuu kordhiyo tirada Gaadiidka socdaalka waxaanan rabnaa in dad badani u raacaan si wadajir. Tareemadu iyo Basaskuba waa inay noqdaan kuwo soo jiidasho leh, istareex leh isla markaana yimaada wakhti sax ah. Waxaanu rabnaa in aan dhisno dariiqo tareemo oo aad u badan oo ku yaal gobolka Skåne. Waa lagama maarmaan in aan helno safar gaaban, oo dhakhso badan gaadiido socdaal oo waqti xaafid ah.
Dhammaan dadweynaha reer Skåne oo idil waa inay si degdeg ah u awoodi karayaan inay helaan daryeel caafimaad oo tayo sare leh sidaa darteed waxaanu dooneynaa in aan xoogga saarno xarumaha caafimaadka ee Skåne. Shaqada ka hortagga waxay udub dhexaad u tahay xildhibaannada waxaanan rabnaa inaan diirada saarno caafimaadka guud ee dadweynaha. Dadweyne reer Skåne ah ayaa heli doona Shaqo iyo waqti aad u fiican oo macno ku dhisan.
Cod aad siisay Xisbiga Bay'ada wuxuu u dhigmaa cod aad u codeysay sinnaanta, bani-aadminimada iyo kalsoonida mustaqbalka. Dhamaan dadweynuhu xuquuqda waa ka mid iyo qiimaha waxayna udub dhexaad u tahay siyaasadda Xisbiga bay'ada. Waana waqtigii aanu wada noqon lahayn kuwo geesinimo leh oo masuuliyad ka saaran mid cir iyo dhul ah. Xisbiga bay'ada ayaa u arkaan in siyaasaddu ay tahay in ay hogaanka u qaadato mustaqbal waara. Mana ah cimiladu mid ku sugi karta.
Xisbiga bay'ada ee gobolka Skåne ayaa doonaya:
1. Skåne waa in ay noqotaa mid aan lahayn shidaad wax u dhima iyo cimilada suuban sanadka 2030.
2. Wakhtiyada safarka oo la gaabiyay iyo in la kordhiyo wakhtiyada gaadiidka dadweynaha iyada oo loo marayo nidaam adag oo tareeno iyo basasba ah
3. La Qaado tallaabooyin dhowr ah oo ku saabsan nadiifinta biyaha maalmeedka, wabiyada, harooyinka iyo badaha, iyo sidoo kale helitaanka ammaan ee biyo nadiif ah ee gobolka Skåne
4. La geliyo 250 milyuun sannadkiiba si loo abuuro horumarinta caafimaadka iyo daryeelka aasaasiga ah ee ugu sareeya.
5. Kordhinta helitaanka dhalaanka iyo dhalinta ee caafimaadka maskaxda
6. Laga dhigo socdaallada kuwa waari kara, albaab ilaa albaab, soo jiidashana leh
7. Lasoo dejiyo nidaam daryeel hor leh waqtiga haweenka ay umulaan kadib
8. la labo-laabp dadaalka dhaqaale ee caafimaadka dadweynaha ee sanadka 2018-2022
9. Inay jirto fursad in la heli karo dhakhtarka cilmi nafsiha oo la xidhiidhi karo ee xarun kasta oo caafimaad ah
10. Laga shaqeeyo in koontaroolka xuduudaha ee ku yaalla laga qaado